Thoughts – Page7– အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 30 March 2010 30 March 2010 Categories Reproduction, Thoughts2 Comments on Does Your Mind Really Belong to You?
၁၆နှစ်သားလေးတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ထံ ဖုန်းဆက်သည်။ သူ့အသက်က လာမည့်လတွင် ၁၆နှစ်ပြည့်တော့မည်ဟုဆိုသည်။ ကျွန်တော့် စာဖတ်ပရိသတ်ဟုလည်း ဆိုပါသည်။ ဆယ်တန်းဖြေထားသည်တဲ့။ သူ့နေရပ်၊ သူ့အမည်ကို မေးတော့လည်း ဖြေပါသည်။
သို့ဖြင့် သူမေးချင်တာမေးရန် လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်သောအခါ သူကြိုက်နေသော ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရှိနေကြောင်းနှင့် ထိုကလေးမလေး သူ့ကို ပြန်ကြိုက်လာစေရန် မည်သို့ ချဉ်းကပ်ရမည်နည်းဟု မေးပါသည်။
သည်မေးခွန်းက ကျွန်တော့်အတွက် ရိုးတာနေသော မေးခွန်းပင်ဖြစ် သည်။ ခဏခဏအမေးခံရဖန်များသဖြင့် “ဖူးငုံ”ဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းမှာ ပင် “ဂေါ်ဖတ်စာ”ဟု အခန်းဆက်ရေးခဲ့ဖူးသည်မှာ တစ်နှစ်လောက်ပင် ရှိပါသေးသည်။ “ကျွန်တော့်စာဖတ်ပရိသတ်”ဟုဆိုထားသော လူငယ်လေးမှာ ထိုစာကို ဖတ်ဖူးထားဟန်မတူချေ။ ကျွန်တော် ရေးပြီးသားကိုပင် တခုတ်တရ မေးနေပြန်တော့သည်။
ကျွန်တော်လည်း ဖြေပေးလိုက်ပါသည်။ သည်မေးခွန်းက သူလို လူပျိုပေါက်စတွေသာမက တက္ကသိုလ် တတိယနှစ်ကျောင်းသားတွေ မေးတာကိုပင် လွန်ခဲ့သည့်လကမှ ကြုံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အတွက် အပန်းမကြီးလှပါ။ ဖြေပေးလိုက်ပါသည်။
သူက နောက်တစ်ခု မေးစရာ ရှိသေးတယ်ဟု ဆိုပါသည်။ “ကဲ… မေး”ဟု ဆိုသောအခါ သူက သင်္ကြန်မှာ ရေကစားချင်တယ်၊ သို့သော် သူ့မှာ ပိုက်ဆံ မရှိသဖြင့် အလုပ် ဘယ်မှာ ရှာရမလဲဟု မေးပြန်ပါသည်။
သူ ဖုန်းဆက်သောအချိန်သည် မတ်လ နောက်ဆုံးပတ် ဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်က ဧပြီလလယ်။ သူက ရေကစားဖို့ ပိုက်ဆံလိုသဖြင့် အလုပ် ဘယ်မှာ ရှာရမလဲဟု ကျွန်တော့်ကို မေးပြီ။ မေးသမျှ ဖြေပေးနေသူ ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ပိန်သွားရပါသည်။
“နေပါဦးကွ… သား အမေမိဘတွေက ဘာအလုပ်လုပ်ကြသလဲ…”
“အဲ… သားအမေက ဆုံးသွားတာ နှစ်ရက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်…”
ကျွန်တော် စိတ်ပိန်ရာမှ စိတ်လေသွားပါတော့သည်။ အမေ ဆုံးတာမှ နှစ်ရက်ရှိသေး၊ သူက ရည်းစားထားရေးကိစ္စကို အရေးတကြီး မေးနေသလို သင်္ကြန်ပျော်ဖို့အတွက်လည်း တွက်ချက်ပူပင်နေလေသည်။ ဟုတ်… ဟုတ်သေးတော့ဟု တွေးမိနေရသည်။
အလုပ်ရှာပေးသော လုပ်ငန်းတစ်ခုအမည်နှင့် လိပ်စာကို ပြောပြပေးလိုက်အပြီးတွင် သူဖုန်းချသွားသည်။ သူကသာ ဖုန်းချသွားသည်၊ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့စကားများကြောင့် အူချာချာ ကျန်ရစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်သားသမီးတွေလည်း သူ့လိုပင် ဖြစ်နေကြမည်လားဟု တွေးမိသောအခါ အလန့်တကြား ဖြစ်သွားပါသည်။ စိတ်ကူးထဲတွင် ကျွန်တော် သေကြည့်မိရပြန်သည်။ (အခုတလော ကျွန်တော် ခဏခဏ သေကြည့်မိနေသည်။ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကျွန်တော့်ထက် ငယ်သူတွေ၊ မတိမ်းမယိမ်းတွေ၏ နာရေးကိစ္စနှင့် ကြုံရလေတိုင်း ကျွန်တော် သေကြည့်မိနေသဖြင့် “သေကြည့်မိရပြန်သည်”ဟု ရေးလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။)
ကျွန်တော့် သမီးနှင့်သားရော ထိုသူငယ်လေးလို သူတို့ ရည်းစားကိစ္စ၊ သူတို့အပျော်အပါးကိစ္စကိုသာ ဇန်းတင်နေကြမည်လားဟု တွေးကြည့်လိုက်မိသောအခါ ထိတ်ပျာလာသလိုလို။
ထို “မဟုတ်သေးပါဘူး”က ကျွန်တော့်ကို လာနှောင့်သည်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ၁၉နှစ်သားအရွယ်တွင် ဖခင် ပျောက်ဆုံးသွားတာကို ကြုံ ခဲ့ရဖူးသည်။ ကျွန်တော့်အဖေက သေသွားတာ မဟုတ်၊ ပျောက်သွားတာ ဖြစ်သည်။
၁၉၇၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် နယ်သို့ အော်ဒါရသည်ဟု ဆိုကာ ကားဖြင့် အိမ်မှ ထွက်သွားသည်။ သုံး-လေးရက်အကြာမှာ မန္တလေး ဟံသာဝတီနေ့စဉ်ထဲမှာ ထိုကားကို ပိုင်ရှင်မဲ့အဖြစ်တွေ့ရှိသဖြင့် ရဲက သိမ်းဆည်းထားကြောင်း သတင်းပါလာသည်။ ကားနံပါတ်ကို သိနေသော မန္တလေးသား သူငယ်ချင်းတစ်ဦးက အိမ်ကို လှမ်းဖုန်းဆက်တော့မှ ကျွန်တော်တို့ သားအမိ မန္တလေးကို အူယားဖားယား လိုက်သွားရသည်။
ကားက မေမေ့နာမည်နှင့်ဖြစ်သဖြင့် ပြန်ရလာသည်။ အဖေ့ကိုမူ မတွေ့ရတော့သည်မှာ ယနေ့ထက်တိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ရေတာရှည်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ စခန်းမှူးတစ်ဦး အိမ်သို့ ရောက်လာကာ အဖေ ပျောက်သွားသည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းက သူ့အပိုင်ထဲမှ ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းဘေး ရေမြောင်းထဲတွင် အလောင်းတစ်လောင်း ပေါ်ခဲ့ကြောင်း လာရောက် အကြောင်းကြားပါသည်။ သူအကြောင်းကြားချိန်၌ အလောင်းကို မြှုပ်နှံပြီးခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ပင်ကျော်ပြီမို့ ကျွန်တော်တို့လည်း ဖော်ကြည့်မနေတော့ပါ။
သူ သိမ်းဆည်းထားသော လက်ပတ်နာရီ၊ ပုဆိုးစ၊ အင်္ကျီစ စသည်များအရ အဖေ ဝတ်ဆင်ထားသော အဝတ်အစားများ ဖြစ်ငြားလည်း ကျွန်တော်တို့ ဖော်ပြသော ပုံပန်းနှင့် အဖေ့ပုံပန်း ကွဲလွဲနေသည်ဟု စခန်းမှူးက ဆိုသည်။ အလောင်းကို စခန်းမှူးနှင့်အတူ စစ်ခဲ့သည်ဆိုသော မြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီးကို သွားမေးပြန်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပြောသော ပုံပန်းနှင့် အလောင်းပုံပန်းက သိပ်မကွာဟု ဆိုပြန်သည်။
သေချာ မေးကြည့်တော့ နှစ်ဦးစလုံးက အလောင်းကို တော်တော် လှမ်းလှမ်းမှ စစ်ဆေးခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုနေ့က မိုးတွေ သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာနေသည်။ အလောင်းကလည်း နံစော် ပုပ်ပွနေသဖြင့် အနားသို့ မကပ်ခဲ့ကြဟု သိရပါသည်။
သို့ဖြင့် ကျွန်တော့်မှာ ယနေ့ထက်တိုင် အဖေ့အတွက် ဆွမ်းလည်း မသွပ်ရ၊ အဖေ့ပင်စင်လည်း မထုတ်ရတော့ပါ။ အဖေက တရားဝင် သေသွားတာမှ မဟုတ်တာလေ။
ထားပါတော့… မူလ စကားစပ်နှင့် ပြန်ချိတ်ရလျှင် ထိုစဉ်က အသက် ၁၉နှစ်သာ ရှိသေးသော ကျွန်တော်သည် အဖေပျောက်သွားသဖြင့် ဘယ်လို မှ မဘယ်လိုခဲ့ပါ။ မှန်ရာကို ဝန်ခံရလျှင် အမေ့ကိုရော ကျွန်တော့်ကိုပါ ရိုက်နှက်ဆုံးမတတ်သော ကျွန်တော်တုန်နေအောင် ကြောက်ရသူ မရှိတော့ သည့်အတွက် ဝမ်းတောင်သာနေခဲ့ပါသေးသည်။
မန္တလေးမှ ကျွန်တော့်ထက် အသက်၂၀မျှ ကြီးသော ကျွန်တော့်အစ်မ နှစ်ဝမ်းကွဲကဆိုလျှင် “ဟဲ့ကောင်လေး… မင့်အဖေက ပျောက်နေတာနော်။ ပါးစပ်ကြီး နားရွက်ချိတ်မတတ် အူမြူးမနေနဲ့။ မင့်အဖေ မင်္ဂလာဆောင် မဟုတ်ဘူး”ဟု ကျွန်တော့်ကို မာန်ခဲ့ရသည်အထိပင်။
ထိုဖြစ်ရပ်ကို ပြန်လည် ဆင်ခြင်မိသောအခါ ကျွန်တော့်ထံ ဖုန်းဆက် သူ ၁၆ နှစ်သားလေးကို အပြစ် မမြင်ရက်တော့သလို ဖြစ်လာရပါသည်။ သူလည်း သူ့အကြောင်းနှင့်သူ ရှိမှာပေါ့လေဟု စတွေးမိသွားပါသည်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် လွန်ခဲ့သည့် တစ်လ မပြည့်ခင်အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဇနီးမောင်နှံ အသုဘအိမ်သို့ သွားခဲ့သည်ကို သတိရသည်။ မိတ်ဆွေ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ ခင်ပွန်း တိမ်းပါးသွားသည်ဟု သိလိုက်ရသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အရွယ်က အရွယ်ကောင်း၊ ၄၁နှစ်သာ ရှိသေးသည်။
သာရေးကို မသွားလို့ကောင်းပေမင့် နာရေးကျတော့ သွားရမည်ဟူသော အသိဖြင့် သတင်းမေးသွားခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသမီးက တော်သည်။ ပူဆွေးမနေချေ။ သူ့အကြောင်းပြကလည်း ရှင်းသည်။ သူ့မိသားစုမှာ သူက ပူဆွေးနေလျှင် လူလားမမြောက်သေးသော သူ့သားသမီးတွေက သည်ကိစ္စဝိစ္စတွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်တော့မည် မဟုတ်ချေ။ တစ်အိမ်တည်းနေ သူ့အမေကလည်း ရောဂါသည်၊ သူ့အစ်မကလည်း ရောဂါသည်၊ သူတစ်ဦးတည်းသာ ကျန်းကျန်းမာမာဆိုတော့လည်း သူကသာ အရာရာကို စီမံရတော့မည် ဖြစ်ပေရာ သူ့မှာ ကြေကွဲခွင့် မရတော့ပါဟု ဆိုပါသည်။
ကျွန်တော်က ထိုအမျိုးသမီး၏ အားမာန်သတ္တိကို ကျိတ်ချီးကျူးနေမိသည်။ တစ်ခုပဲ ဘဝင်မကျ၊ ဘယ်တော့ တွေ့တွေ့၊ ရှိုးအပြည့်နှင့် သပ်ရပ် ကျော့မော့နေတတ်သော ထိုအမျိုးသမီးမှာ ယခုအခါ မျက်နှာပြောင်နှင့်၊ ကစုပ်ကဖတ်။ တစ်စက်မှ မြင်မကောင်းချေ။
ထို့ကြောင့် အသုဘ အိမ်မှ အပြန်မှာ အတူပါသည့် ကျွန်တော့်အိမ်သူကို ပြောမိသည်။
“ကိုယ်သေသွားလို့ အသုဘကိစ္စ မပြီးသေးချိန်မှာ အဲလို မနေနဲ့နော်။ လှလှပပ၊ ကျော့ကျော့မော့မော့ ဖြီးလိမ်း ပြင်ဆင်ပြီး ဧည့်ခံ။ ငိုလည်း မနေနဲ့”
“အဲလိုကျ လူတွေက ကျွန်မကို မေးငေါ့ကြမှာပေါ့ရှင့်…”
“အေး… မေးမငေါ့အောင် ကိုယ်က အဲလို မှာသွားကြောင်း စာနဲ့ပေနဲ့ အတိအလင်း ရပ်ကျော်ရွာကျော် ရေးပေးထားခဲ့မယ်”
ကျွန်တော် အဲသလို ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။
အဖေ ပျောက်သွားတုန်းက ကြောက်ရမည့်သူ မရှိတော့သည်မို့ ကိုယ့်ဖို့ ကိုယ်တွက်ကာ ကျိတ်ဝမ်းသာခဲ့ဖူးသော ကျွန်တော်၊ သူများအသုဘ သွားမေးသောအခါ ပူဆွေး ငိုကြွေး မနေဘဲ လုပ်သင့်တာတွေကို အားမာန် အပြည့်နှင့် ဇယ်ဆက်သလို လုပ်နေသည့် ကျန်ရစ်သူ ဇနီးသည်အား ကျိတ် ချီးမွမ်းဖူးသည့် ကျွန်တော်၊ ကျွန်တော် သေလျှင် ကျွန်တော့်ဇနီးမယား၊ သမီးသားများကိုလည်း အနေအစား မပျက်၊ ပုံမပျက်ပန်းမပျက်နှင့် မပူမဆွေးဘဲ နေကြရန် ခဏခဏ မှာတတ်ဖူးသော ကျွန်တော်…
ထိုကျွန်တော်က ယခု ၁၆ နှစ်သားလေးက သူ့မိခင် ကွယ်လွန်ပြီး နှစ်ရက်အကြာမှာ ရည်းစားကိစ္စ၊ သင်္ကြန်ပျော်ဖို့ ကိစ္စတွေ မေးချလိုက်သောအခါ စိတ်ထဲတွင် တစ်မျိုးဖြစ်သွားမိသည့်အပြင် ကျွန်တော်သေရင်ရော ကျွန်တော့်သားသမီးတွေပါ ထိုသို့ ဖြစ်ကုန်ကြမည်လားဟု တွေးနေမိခြင်းမှာ တော်တော်တော့ အမြီးအမောက် မတည့်လှပါချေ။
အမှန်တော့ ကျွန်တော် မှားနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထို၁၆နှစ်သားလေး မှန်သည်ဟု တစ်ချက်မှာ ထက်ခနဲ တွေးမိသွားရသည်။
ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ဇနီးနှယ်ပင် “လူတွေ”မည်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားနေမိခြင်းသာဖြစ်သည်။ လူတွေကို စဉ်းစားသောအခါ တရားကိုယ်ကို မမြင်မိတော့ပါ။
တရားကိုယ်မှာ အရှင်းကြီးပင်။ ထိုကလေး ရည်းစားကိစ္စကို အာရုံ မထား၊ သင်္ကြန်ပျော်ဖို့လည်း စိတ်မအားဘဲ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ရက်က တိမ်းပါးသွားသော သူ့မိခင်ကိုသာ တသပြီး ပူဆွေးကြေကွဲနေလို့လည်း သူ့မိခင်ကတော့ ပြန်ရှင်လာမည်မဟုတ်သည်မှာ သေချာလှသော တရားကိုယ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀ကျော်က ကျွန်တော် ဝမ်းသာခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်တော် ဝမ်းနည်းခဲ့သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော့်ဖခင်သည်လည်း ကွယ်ပျောက်သွားရာမှ ပြန်ပေါ်မလာတော့သည်မှာလည်း တရားကိုယ်ပင်။
တစ်နည်းပြောရလျှင် သေသူက သေသွားပါပြီ။ အသက်နဲ့ ခန္ဓာ အိုးစားကွဲသွားပါပြီ။ ဘာမှ မသိနိုင်တော့ပါ။
ကျန်ရစ်သည့် ရှင်နေသူတွေအတွက် အရေးကြီးသည်မှာ ဆက်ရှင်နေနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေရှိသည်၊ ကိုယ်ပိုင်ဗျာပါဒတွေ ရှိသည်၊ ကိုယ်ပိုင်သောကတွေ ရှိသည်၊ ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်၊ မျှော်လင့်ချက်၊ လိုအင်များလည်း အသကအသက ရှိကြပါသည်။ သည်တော့ သူတို့ ဆက်ရှင်နေကြရပါလိမ့်ဦးမည်။
ပူဆွေး ကြေကွဲနေခြင်းအားဖြင့် သေသူကလည်း ပြန်ရှင်မလာနိုင်ပါ။ သို့သော် ရှင်သူအတွက်တော့ ထိုသို့ ပူဆွေးကြေကွဲနေမည်ဆိုပါက အလုပ် ပျက်တော့မည်လည်း အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူသည်လည်း ဘဝမှာ နောက်ထပ် ဘယ်နှရက်၊ ဘယ်နှလ၊ ဘယ်နှနှစ် ဆက်ရှင်နေဦးမည်ကို ကြိုမသိနိုင်ချေ။ သို့ဖြစ်ရာ သူ့အတွက် တစ်ရက်၊ တစ်နာရီက တန်ဖိုးရှိ နေမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော် သေပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ ကျွန်တော့်သား ရည်းစားနှင့် ဖုန်းမပြောဘဲ နေနေလို့လည်း ကျွန်တော် ပြန်ရှင်လာတော့မည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်သမီး ကျောင်းအပျက်ခံလိုက်လို့လည်း ကျွန်တော် ပြန်ရှင် လာတော့မည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်ဇနီး သနပ်ခါးမလူးဘဲ အပူရုပ်နှင့် တရှုပ်ရှုပ် ငိုနေလို့လည်း ကျွန်တော် ပြန်ရှင်လာတော့မည် မဟုတ်ပါ။ ဒါက အင်မတန် သေချာပါသည်။
အဲတော့ ရှင်သည့်ဘဝမှာ ရှင်သူလို ဆက်နေကြမည်မှာလည်း အမှန်တော့ ဓမ္မတာ။
ထိုအချက်ကို တွေးမိသောအခါ မအေသေပြီး နှစ်ရက်အကြာမှာ ရည်းစားကိစ္စ၊ သင်္ကြန်ပျော်ဖို့ကိစ္စအတွက် ကြောင့်ကြစိုက်နေသော ထို လူငယ်လေးမှာ ချစ်စရာကောင်းလို့ လာပါသည်။
အဓိကကတော့ တွေးပေါက်သာ ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော် စဉ်းစားမိသွားရပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့… “တွေးပေါက်”က အတော်စကားပြောပါသည်။
၂၀၀၈ခုနှစ် ဧပြီလ နောက်ဆုံးပတ်ထုတ် အတွေးသစ်ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖော်ပြခဲ့တာလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်တာပါ။
Author lettwebawPosted on 28 March 2010 28 March 2010 Categories Reproduction, Thoughts8 Comments on A Way of Thinking
Author lettwebawPosted on 27 February 2010 16 January 2013 Categories Reproduction, Thoughts2 Comments on Where Shall We Keep Those Baskets?
Is it Fate or Destiny???
ကံ – ကံ၏ အကြောင်းတရား
၂၀ဝ၈ ခုနှစ်က ဒီဇင်ဘာမှာ ဘိုကလေး မြို့နယ်ထဲက ရွာလေးတချို့ကို ရောက်ခဲ့သည်။ နာဂစ်ဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းက ၂၀ဝ၈ မေမှာ မွှေခဲ့တာ ဆိုတော့ ခြောက်လကျော်ကာလသာ ရှိသေးချိန်။ အားလုံး ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ရန် တာစူနေကြဆဲ။ မသိသာသေး။
၂၀ဝ၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာမှာတော့ လပွတ္တာမြို့နယ်ထဲက ရွာလေး သုံးရွာမှာ တစ်ရွာလျှင် ဆယ်ည၊ ဆယ်ရက်တိုင်တိုင် နေထိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပြန်သည်။ နာဂစ်အလွန် တစ်နှစ်ခွဲကျော် အချိန်။ သိသာစ ပြုနေလေပြီ။
သိသာစပြုနေသည်မှာ လူတန်းစား ကွာဟမှုပင်ဖြစ်သည်။ မုန်တိုင်းက အားလုံးကို တန်းညှိပစ်ခဲ့သည်။ ချမ်းသာသူလည်း အိမ်မရှိ၊ ယာမရှိ။ ရွှေငွေဥစ္စာ စည်းစိမ်မှန်သမျှ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်း။ အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုပင် အနိုင်နိုင် ဖြစ်ကုန်ကြသည်မှာ မုန်တိုင်းသင့် ဒေသတစ်ခုလုံးပင်။ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ဝေခြမ်းရေး၊ အထောက်အပံ့အကူအညီကို လိုအပ်ခဲ့ကြသူများမှာလည်း ထိုဒေသမှ လူတိုင်းသာ။ မုန်တိုင်းမတိုင်ခင်က ချမ်းသာ ကြွယ်ဝခဲ့ဖူးသူ၊ နေနိုင်စားနိုင်ခဲ့သူများလည်း အပါအဝင်။ အကုန်လုံး အတူတူနှင့် အနူနူ။
အခု တစ်နှစ်ခွဲကျော် အကြာမှာဖြင့် လူနည်းစုတချို့က အတော်လေး ထူထူထောင်ထောင် ဖြစ်နေကြလေပြီ။ ဆိုင်နှင့် ကန္နားနှင့်၊ တယ်လီဖုန်းနှင့်။ တချို့က ဗီဒီယိုရုံဖွင့်ကာ အလုပ်ဖြစ်၊ တချို့က ဘိလိယက်ခုံ၊ တချို့က အရက်ဆိုင်။ သူ့ဟာနှင့်သူ ဟန်ကျပန်ကျဖြစ်နေသူတွေက ထိုးထိုးထောင်ထောင် ပေါ်ပေါက်နေသည်။
တချို့ကျတော့လည်း နာဂစ်မတိုင်ခင်က သိပ်အဟုတ် မဟုတ်လှ။ နာဂစ်ဖြစ်၊ ဝေခြမ်းရေးတွေ၊ အကူအပံ့တွေ ပေါ်လာတော့မှ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းလိုက်ကြကာ အခုအခါမှာ ဟန်ကျနေသူတွေလည်း အလျှိုလျှို မြင်နေရသည်။
“ဝေခြမ်းရေးက ထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက် အခုအချိန်မှာ နေစရိတ် စားစရိတ် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ကုန်စရာမရှိဘူး။ အဲတော့ သည်အချိန်မှာ ပိုက်ဆံ ရှာနိုင်ရင် ရှာနိုင်သမျှက ကိုယ့်အတွက် အသားတင်အမြတ်ချည်းပဲ” ဟု မိသားစုကို ပြောခဲ့ကာ မုန်တိုင်းလွန်စ၊ ထောက်ပံ့မှုများ ဝေစည်နေချိန် ကာလတွင် ကုန်းရုန်း ရှာဖွေခဲ့ရာမှ ယခုအချိန်တွင် ဗီဒီယိုရုံငယ်တစ်ခု၊ အရက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်၊ ကုန်စိမ်းဆိုင် တစ်ဆိုင်ကို ပိုင်ဆိုင်နေလေပြီဖြစ်သူ တစ်ဦးကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ခဲ့ရပါသည်။
အဲ… အများစုမှာမူ သိပ်ထူးခြားမလာဘဲ ဒုံရင်းသံသရာမှာ လည်နေကြသည်။ ကဏန်းနှိုက်သည့်ဘဝ၊ ပိုက်ထောင်သည့်ဘဝ၊ သူများ လယ်၊ သူများဆားဖိုမှ အခစားဘဝများတွင် ကျင်လည်နေသူတွေ အများ အပြား ရှိသလို ဘာမှ မည်မည်ရရ မလုပ်ဘဲ ဝေခြမ်းရေးကို မျှော်လင့် အိပ်မက်ဆဲ ယောင်ခြောက်ဆယ်တွေ အနည်းအပါးကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါသည်။
ဘဝင်သိပ်မကျမိပါ။ ထိုရွာများတွင် ခဏတဖြုတ် နေထိုင်ခဲ့ရစဉ်က ရွာသားတွေကိုလည်း မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ဘဝင်မကျသည့်အကြောင်းကို တွင်တွင် ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အခုလည်း ပြောကြည့်ချင်လာရပြန်ပါသည်။
လူချင်းအတူတူ ဘာတွေက ကွာနေလို့ အခုလိုတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်မိသည့်အတွက် ဘဝင်မကျဖြစ်ရခြင်းပင်။
လူမတန် ကံချဆိုသည့်အတိုင်း အတိတ်ဘဝ အဆက်ဆက်က ကံကို ရိုးမယ်ဖွဲ့မည်ဆိုလျှင်တော့ အဖြေက လွယ်ပါသည်။ ဘာမှလည်း ရှည်ရှည်လျားလျား စဉ်းစားနေဖို့ လိုမည် မဟုတ်ချေ။ သို့သော် အဲဒါက အဖြေ မဟုတ်ဟု ထင်ပါသည်။
ပစ္စုပ္ပန်မျက်မှောက်၌ ပြုကြသော မနောကံ၊ ဝစီကံ၊ ကာယကံများကသာ ထိုအရာများအတွက် အဖြေဟု ကျွန်တော် မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်ပါသည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဗီဒီယိုရုံငယ်၊ အရက်ဆိုင်၊ ကုန်စိမ်းဆိုင် ပိုင်သော မိသားစုသည် နာဂစ်မတိုင်ခင်က ရရစားစား၊ ဝါးဝါးမျိုမျို၊ သူလို ငါလို ခပ်နုတ်နုတ်သာဖြစ်ခဲ့သည်တဲ့။ နာဂစ်မှာတော့ ရှိစုမဲ့စုလေးတွေ အကုန်ပါသွားသည်။ သို့သော် သူ့ မနောကံ (ဝါ) သူ့အတွေးအမြင် က မှန်သွားသည်။ ဝေခြမ်းရေးကြောင့် နေစရိတ်၊ စားစရိတ်အတွက် ပူစရာ မလိုဆဲကာလမှာ ရတတ်သမျှ အသားတင်ဟု သဘောထားကာ ကုန်းရုန်း ရှာဖွေသည့် ကာယကံမြောက် အမှုကို သူတို့ မိသားစု ပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုကံများ စီမံသည့်အတိုင်း ယခုအခါတွင်မူ သူတို့မိသားစုမှာ ဟန်ကျနေကြလေပြီ။ ပစ္စုပ္ပန်ကံကလည်း စကားပြောသွားသည်မှာ အထင်အရှားပင်။
တခြား ဟန်ကျနေသူတွေကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း ထိုအတိုင်းသာ ဖြစ်သည်။ အားတိုင်း ဗီဒီယိုကြည့်နေ၊ ကာရာအိုကေဆိုနေ၊ အရက်သောက်နေ ဘိလိယက်ထိုးနေကြသူတွေထဲမှာ ဟန်ကျနေသူတွေကို တွေ့ရခဲလှသည်။ ဗီဒီယိုရုံတွေ၊ အရက်ဆိုင်တွေ၊ ဘိလိယက်ခုံတွေမှာက လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်နိုင်မည့် လူတန်းစားက မင်းမူထားသည်။
ဘာဖြစ်လို့ သည်လိုတွေ ဖြစ်ကုန်သနည်းဟု စဉ်းစားကြည့်သောအခါ “အသိဉာဏ်နှင့် ဆင်ခြင်တုံတရား“ဆိုတာကြီးက ဘွားဘွားကြီး ပေါ်လာသည်။ အသိÓဏ်နှင့် ဆင်ခြင်တုံတရား နည်းပါးသူတွေက ဒုံရင်းမှာ ကျန်ရစ်နေပြီး အသိဉာဏ်နှင့် ဆင်ခြင်တုံတရား အထိုက်အလျောက် ရှိသူတွေက သည်တစ်နှစ်ခွဲလောက်လေးအတွင်းမှာတင် အတော်လေး ထူထူထောင်ထောင် ပြန်ဖြစ်လာနေကြသည်ကို မြင်နေရပါသည်။
ရွာတစ်ရွာမှ မိသားတစ်စုဆိုလျှင် အတုယူဖို့ပင် ကောင်းသေးတော့သည်။ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင် ယောက်ျားသားမှန်သမျှက နာဂစ်ထဲမှာ အသက် ပါသွားကြပြီး မိန်းမသား သားအမိ သုံးယောက်နှင့် အသက် ၆၀ ကျော် ဖခင်ကြီး၊ ကလေးငယ် နှစ်ယောက်သာ ကျန်ရစ်သည်။ သည်ကြားထဲက သူတို့မှာ ကုန်စုံဆိုင်နှင့်၊ တယ်လီဖုန်းနှင့် ဟန်ကျပန်ကျ တွေ့ရသည်။
ယောက်ျားသား ရင့်မာကြီးတွေ ရှိနေသော ရွာထဲက တခြား မိသားစုများမှာတော့ မနည်း ရုန်းကန်နေရသည့်ဘဝ။ သည်မှာလည်း ဘာကွာသနည်းဟု ဆန်းစစ်မူ အသိဉာဏ်နှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မိသားစုဝင် အရင်းအချာတွေကို ဆုံးရှုံးရတာကတော့ အတူတူချည်းသာပင်။ သို့သော် ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေက အသက်ဆက်ဖို့ လိုသေးသည်။ ဒါကို ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်ပြီး ပူဆွေးမှုကို ရပ်တန်းက ရပ်ကာ လုပ်စရာရှိတာ ဇယ်ဆက်သလို လုပ်သွားကြသည့် သားအမိ သားအဖတစ်တွေက တင့်တောင့်တင့်တယ် ပြန်ဖြစ်လာသည်။ ပူဆွေးတသရင်း အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေကတော့ ဝေခြမ်းရေးက ပေးတာလေး စားလိုက်၊ ပိုလျှံတာလေး ရောင်းချကာ စိတ်၏ဖြေရာ အပျော်ရှာလိုက်နှင့် အခု တစ်နှစ်ခွဲ အကြာမှာ နဂိုဘဝထက်ပင် နုံချာကာ လက်လုပ်လက်စားဘဝတွေမှာ ကျင်လည်နေကြဆဲ။
ဒါက မုန်တိုင်းသင့် ဒေသတစ်ခုတည်းမှာ ဖြစ်နေသည်သာ မဟုတ်၊ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ ဖြစ်နေသည့် အဖြစ်။ “တရုတ်လိုရှာ၊ ကုလားလို စု၊ မြန်မာလို မဖြုန်းနဲ့”ဆိုသော ရှေးစကားမှာ အလကားစကား မဟုတ်ချေ။ မြန်မာတွေ၏ အသိဉာဏ်နှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားကို မီးမောင်းထိုးပြနေသော စကားပါကလားဟု တွေးမိလာရပါသည်။
(၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ထုတ Bi Weekly Eleven ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၄၃မှာ ဖော်ပြထားတာလေးကို ထပ်ဆင့် တင်ပြလိုက်တာပါ။)
Author lettwebawPosted on 14 January 2010 17 February 2010 Categories Reproduction, Thoughts1 Comment on Is it Fate or Destiny???